Barre Aadan Shire (Hiiraale) oo u goodiyay Cabdi Raxmaan Faroole (Muxuu ku hanjabay?) |
Barre Aadan Shire (Hiiraale) oo u goodiyay Cabdi Raxmaan Faroole (Muxuu ku hanjabay?)
Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale) oo ah xildhibaan hore hadana u babac dhigaya cudud xooggan oo ah is-baheysi ciidan oo kala yimid Kenya, Ethiopia iyo maamulka Puntiland ayaa waxa uu ugu goodiyay maamulka Puntiland in kuleylku uu markooda taaban doono hadii aysan joojin garabka ay Axmd Maoobe ku siinayaan dagaalka isaga ka dhanka ah.
“Maamulk Puntiland waxa aan u sheegayaa in ay ka waantoobaan hurinta colaada Kismaayo. Hadii ay diidaaan arintaasi oo ay ka waantoobi wayaan waxa ay la kulmi doonaan cawaaqibta ay leedahay markooda ayaana kuleyku gaarayaa. Maaha war leeska yiri, waa war xaqiiqa ah, cid kastana waa sugeysaa jawabta wax kasta oo xumaan ah oo ay cid kale u geysato”, sidaa waxaa ku warmay sarkaal ka tirsan lataliyaasha Barre Hiiraale oo saxaafada war kooban siiyay.
Dhanka kale, waxa uu sarkaalkaani dafiray in shalay laga saaray deegaanka ay kusugnaayeen ee duleedka Kismaayo, hasa yeeshee waxa uu xaqiijiyay in deegaankaasi ay gaareen xubna kamid ah maleeshiyaadka Axmed Madoobe taageera ee isugu jira qolyaha laga keenay deegaanka Soomaalida ee Ethiopia iyo Puntiland kuwaas oo uu sheegay in si gaadma ah ay sedax qof oo shacab ah ay ku dileen kadibna ay goobta isaga soo laabteen.
“Majiraan wararka sheegaya in innaga deegaan nalaka saaray. Qolyihii Qabri Daharre, maamulka Puntiland, Ethiopia ka yimid iyo ciidamada xabashida Kenya ayaa si gaadma ah deegaankaan ku yimid. Waxa ay dileen sedax shacab ah markii aan xabadaha maqalnay oo aan isu diyaarinnay dagaal ka dhan ahna waa soo laabteen”, Sarkaalka ayaa ku waramay.
Si kastaba, goodinta Barre Hiiraale oo aan lagu cadeyn tilaabada rasmiga ah ee laga qaadayo maamulka Puntiland ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo saacado kahor ay soo shaac baxday in dagaalkii Kismaayo ay ka qeyb qaateen boqolaal ka tirsan ciidanka amaanka Puntiland kuwaaas oo qaar badan oo kamid ah kusoo dhaawacmeen laga geeyay Gaal-kacyo si loogu dabiibo.